Ọkachamara Semalt na-akọwa ihe ndị dị mkpa ị kwesịrị ịmara banyere nkwụsịtụ nchịkwa
Rụpụta ngwa na okwu mgbe niile:
Ejirila ngwa dịgasị iche iche mepụta okwu mgbe niile ma ọ bụ regex. Site na PowerGREP, anyị nwere ike ịchọọ site na nchekwa na faịlụ na kọmputa anyị, dezie data ma nata ozi site na ihe dị iche iche. PowerGREP njirimara njirimara mgbe niile dị na Pearl,. Ntaneti netwọk na Java ma bara uru maka mmemme, webmasters, na ndị mmepe ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ngwa desktọọpụ ma ọ bụ mobile, ị nwere ike ịchekwa ọtụtụ oge na ume site na nkwupụta mgbe niile. Naanị ịkwesịrị itinye ụfọdụ Koodu ka ha nweta ngwa. RegexBuddy na EditPad Pro bụ ngwa ọhụụ abụọ ndị e wuru na okwu ọ bụla.
Kwesịrị ekwesị maka ndị na-abụghị ndị na-eme programmers:
Ụkpụrụ regex jikọtara eriri ahụ. Ihe omuma a bu ihe ntanetiri. Atọ bụ otu ihe na usoro regex nke na-elekwasị eriri ahụ anya n'ụzọ ka mma. E nwere ihe karịrị iri na anọ na-agụnye regex, dabere na ha pụtara na ngwa.
XPath - Ngwá ọrụ dị ike maka gị:
XPath bụ otu n'ime ihe nchịkọta ọdịnaya s na ndị nchịkọta data. Ọ na-anakọta usoro data site na ibe weebụ dị iche iche, na-emepụta ụdọ ma na-ahazi data na usoro a pụrụ ịdabere na ya. Usoro XPath na-achọpụta ederede nke ebe nrụọrụ weebụ, na-enyocha àgwà ya na nchịkọta ọdịnaya mma maka gị. Igwe a na ntanetị weebụ na-enye ngwa ngwa regex, dị ka azụghachi akwụkwọ, ihe odide POSIX na mgbanwe.
Otu akara nke Regex nwere ike dochie 100 nke koodu:
Otu eriri nke regex zuru ezu iji dochie 100 ederede nke koodu site na ibe weebụ.Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị mụta usoro mmemme kpụ ọkụ n'ọnụ iji nweta ọrụ gị. Site n'ikwu okwu mgbe nile, ọ dị mfe nchịkọta data site na weebụsaịtị dị iche iche ma mepụta usoro iheomume na eriri.
Nkwupụta okwu mgbe niile bụ ngwá ọrụ bara uru iji chọpụta na nchịkọta weebụ ọdịnaya. Ha na-enye ezigbo ahụmịhe ọrụ ma dị mma maka ndị ọkachamara na ndị na-abụghị ndị ọkachamara Source .